रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली नगरपालिका तथा मन्थली उपत्यका
मन्थली सहकारी संस्था अवस्थित तामाकोशी सेवा समितिको स्वामित्व रहेको भवन
मन्थली सहकारीको कार्यालय तथा सदस्यहरु आर्थिक कारोवार गर्दे
९६ औं अन्तरराष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा मन्थली सहकारी प्रदेश नं. को उत्कृष्ट सहकारी व्यवसायबाट पुरस्कृत
करदाता सेवा कार्यालय, मन्थलीद्वारा मन्थली सहकारीलाई आ.व. २०७६–७७ मा रामेछापको उत्कृष्ट करदाताबाट सम्मानित
मन्थली साकोसको २३ औं साधारण सभामा प्रमुख अतिथि मन्थली नपा प्रमुख, अन्य अतिथिहरु तथा संस्थागत व्यक्तित्वहरु
कार्यक्षेत्रहरुमा साधारण सभा पश्चात मन्थलीमा आयोजित अन्तिम दिनको मन्थली साकोसको २३ औं वार्षिक साधारण सभा
मन्थली साकोसको २३ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष ऋणी सदस्यहरु सम्मानित
मन्थली साकोसको २२ औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष बचतकर्ताहरु सम्मानित
कर्मचारी व्यवस्थापन टिम
मन्थली सहकारी संस्थामा आफना सदस्यहरुले विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरु मार्फत रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । बचतको ब्याज दर वार्षिक ७ प्रतिशत देखि १२ प्रतिशत सम्म रहेको छ ।
मन्थली सहकारी संस्थामा सदस्यहरुले विभिन्न प्रयोजन तथा उद्देश्यका लागि तोकिएको शर्तमा साँवा–ब्याज बुझाउने गरी ऋण लिन सकिनेछ । ऋण लिनका लागि सदस्यले आफ्नो वा आफ्नो एकाघर वा आफ्नो तीनपुस्ते भित्रको स्वामित्वमा रहेको घर–जग्गा धितो दृष्टि बन्धक राख्नु पर्नेछ । ऋण लिनका लागि मन्थली सहकारी संस्थाको सदस्य भएको अवधि न्यूनत्तम ३ महिना पुगेको हुनु पर्नेछ । ऋण प्रयोजनको उद्देश्य ब्याज दर वार्षिक १३ प्रतिशत देखि १६ प्रतिशत सम्म रहेको छ ।
मन्थली सहकारी संस्थामा विदेशबाट तथा स्वदेशबाट रकम पठाउन सकिने रेमिट्यान्स् सेवा शुभारम्भ गरेको छ । जसबाट स्वदेश तथा विदेशी मुलुकहरुबाट पठाएको रकम रामेछाप जिल्लामा यस सहकारी संस्था मार्फत् आफना सदस्य एंव रामेछापवासीले जिल्लाभित्र रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो रेमिट्यान्स सेवाका लागि मन्थली सहकारी संस्था हिमाल रेमिट तथा सिटी एक्सप्रेम मनी ट्रान्सफरसंग आवध्द भएको छ । स्वदेश तथा विदेशबाट रामेछाप जिल्लामा रकम पठाउनका लागि सम्बध्द मुलुकहरुको जानकारी लिन हिमाल रेमिट तथा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको तलको वेवसाइटमा क्लिक गर्नुहुन अनुरोघ छ ।
स्वास्थ्य उपचार शुल्कमा छुट
मन्थली सहकारी संस्थाद्वारा प्रर्वद्धित तामाकोशी अस्पताल (साविकको नाम तामाकोशी सहकारी अस्पताल) मा वहालवाला सदस्यहरुले स्वास्थ उपचार गरेबापत लाग्ने सेवा शुल्कमा १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा वार्षिक रु. ३,०००।– सम्मको निःशुल्क उपचार व्यवस्था हुँदै आएको सो को वैकल्पिक व्यवस्थापनको रुपमा हाल १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था लागू गरिएको छ । उपचार शुल्क छुटको नयाँ व्यवस्था अनुसार सदस्यहरुले तामाकोशी अस्पताल जतिसुकै रकम बराबरको उपचारमा १५ प्रतिशत रकम छुट सुविधा रहेको छ । विगतमा रु. ३,०००।– नाघेको अवस्थामा सदस्यहरुले सम्पूर्ण उपचार रकम व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । नयाँ व्यवस्थापन अनुसार साउन १, २०७६ देखि सदस्यहरुले मन्थली सहकारी संस्थामा सदस्य स्वास्थ्य बीमा बापत वार्षिक बुझाउनु पर्ने रु. २००।– रकम अव उप्रान्त बुझाउनु पर्ने छैन । उपरोक्त छुटको व्यवस्था सदस्य स्वंय विरामी भएको अवस्थामा मात्र उपलब्ध हुनेछ । सदस्यका परिवारका अन्यको हकमा छुट सुविधा उपलब्ध हुने छैन । सदस्यलाई एम्बुलेन्स प्रयोगमा १० प्रतिशत छुट रहेको छ ।
सदस्य मृत्यु काजक्रिया खर्च
मन्थली सहकारी संस्थाका बहालवाला सदस्यहरुको मृत्यु हुने अवस्थामा मृत्य संस्कार खर्च स्वरुप परिवारका सदस्यलाई रु. २०,०००।– काजक्रिया खर्च उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि सदस्यले मन्थली सहकारी संस्थामा आफू सदस्य भएको अवधिदेखि नियमित रुपमा तोकिए बमोजिम मासिक बचत गर्देआइरहेको हुनु पर्नेछ । अन्यथा उक्त काजक्रिया बापतको रकम परिवारका सदस्यलाई दिइने छैन ।
मासिक बचत सम्बन्धी आधारभूत नियम
– मासिक न्यूनत्तम बचत रु. २००।– अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
– मासिक बचत प्रत्येक महिनाको १० गते सम्ममा बुझाउनु पर्ने ।
– मासिक बचत अग्रिम रुपमा पनि बुझाउन सकिने ।
उपचार छुट सम्बन्धी आधारभूत नियम
सदस्य मृत्यु राहत सम्बन्धी आधारभूत नियम
मोबाइल बैंकिङ सेवा
मन्थली सहकारी संस्थाका सदस्यकालागि मोबाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ । यसको एप्स् सेवाको प्रयोगबाट सदस्यहरुले मोबाइल रिचार्ज, टेलिफोन बिल भुक्तानी, डिसहोम रिजार्च, खानेपानी महशुल भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसका सदस्यहरुले आफ्नो ऐच्छिक खाताको कारोवार तथा मौज्दात रकम तत्काल हेर्न सकिन्छ । यो प्रविधि इन्टरनेटको सुविधा नहुने स्थानमा एस.एम.एस. मार्फत् प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि आफ्नो मोबाइलमा सुचारु गर्न सदस्यहरु एकपटकका लागि मन्थली सहकारीको संस्थाको कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
Copyright © 2010 Manthali SACCOS-All Rights Reserved
Designed by Suresh Shrestha